Abavelisi bobhaka - iChina yobhaka mveliso, abaxhasi
I-Tigernu yefashoni yoyilo lwesikolo
Le bhaka yenziwe nge-polyester ekumgangatho ophezulu, enobungakanani be-31 * 15 * 48cm (L * W * H). Zanele ngokwaneleyo iincwadi zakho, ifowuni, incwadi yokubhalela, ibhanki yamandla, i-headphone, iintambo, amakhadi, iipeni. Kuyanceda ukugcina izinto zakho zilungelelaniswe kakuhle nabahluli abaninzi abahlukeneyo.
Ubhaka bubunzima obukhaphukhaphu kwaye bunomtya oguqulweyo obotshiweyo begxalaba, kukhululeke kakhulu ukunxiba nokuba kulayishwe ngokupheleleyo.
Le bhegi inemibala emi-3 ekhoyo, emnyama, emthubi, ngwevu, efanelekileyo i-unisex.
Eyona bhegi yesikolo, abantwana, ulutsha, umsebenzi, abakhweli, uhambo, ishishini okanye isipho.
Isitayile esingaqhelekanga sebhegi yesikolo esiphakamileyo esingena manzi
Ubungakanani bebhegi yesikolo yi-31 * 11 * 41cm (L * W * H), enegumbi elinye eliphambili kunye nomkhono welaptop olungele ilaptop ukuya kuthi ga kwi-14inch, igumbi elinye langaphambili elinepokotho ezincinci, iipokotho ezimbini zecala lemigca yeebhotile kunye nesambrela. Le bhegi ibanzi kuzo zonke iincwadi zakho, incwadi yokubhalela, ifowuni, ibhanki yamandla, iintambo njalo njalo.
Yenziwe nge-polyester ekumgangatho ophezulu kwaye inemibala emi-5, iyahlangabezana neemfuno ezahlukeneyo.
I-TIGERNU yokuphola ubhaka weshishini elingangeni manzi
Ubungakanani bebhegi yesikolo yi-30 * 18 * 47cm (L * W * H), enegumbi elinye eliphambili kunye nomkhono weLaptop olungele ilaptop ukuya kuthi ga kwi-17inch, igumbi elinye elingaphambili elineepokotho ezincinci ezincinci, iipokotho ezimbini zecala lemigca yeebhotile kunye nesambrela. Le bhegi ibanzi kuzo zonke iincwadi zakho, incwadi yokubhalela, ifowuni, ibhanki yamandla, iintambo njalo njalo.
Yenziwe ngomgangatho wenayiloni ekumgangatho ophezulu.Uziphu ophambili yiTigernu enelungelo elilodwa lomenzi elitshixwa kabini elinokutshixwa ngeendlela ezimbini, ubungqina bokuqhushumba, okuqinileyo kunye nokukhuselekileyo, ubhaka obuchasene nobusela, obonelela ngokhuseleko olongezelelekileyo kubomi bakho bemihla ngemihla.
Obu bhaka wesikolo buyi-28 * 15 * 43cm (L * W * H), enegumbi elinye eliphambili kunye nomkhono welaptop olungele ilaptop ukuya kuthi ga kwi-15.6inch, igumbi elinye elingaphambili lineepokotho ezininzi ezincinci, iipokotho ezimbini zecala lemigca yeebhotile kunye nesambrela Le bhegi iphangalele zonke iincwadi zakho, incwadi yokubhalela, ifowuni, ibhanki yamandla, iintambo njalo njalo.
Yenziwe ngohlobo lwe-oxford ekumgangatho ophezulu kwaye inemibala emi-3 ekhoyo, ihlangabezana neemfuno ezahlukeneyo.Uziphu ophambili nguTigernu onelungelo lokushicilela elinamalungelo amabini elinokutshixwa ngeendlela ezimbini, ubungqina bokuqhushumba, ukuhlala ixesha elide kwaye kukhuselekile. ubomi bakho bemihla ngemihla.
I-TIGERNU uyilo lokuqala ubhaka womfundi olungele abantwana
Le bhegi imnandi kakhulu kwaye ilungele abantwana abancinci.
• ubunzima bokukhanya, ukhetho olulungileyo lwabantwana
• izinto ezikhuselekileyo, ezico-friendly kunye nomgangatho ophezulu, i-allergen simahla kwaye ayinabungozi
• iirholithi zamagxa ezibhityileyo nezandisiweyo, uyilo lwe-ergonomic lunceda ukunciphisa umthwalo kwizinyawo
• Iphaneli yangasemva edityaniswe kakuhle ngesiponji kunye nomnatha inokunyusa ukuhamba komoya
• Iipokotho ezininzi kunye namacandelo anceda ekugcineni izinto zokubhala zilungelelaniswe kakuhle kwaye zifumaneka lula
• umtya wegxalaba onokuhlengahlengiswa
• Umtya obonakalisayo kumtya kunye neepokotho ezisecaleni, okwenza ukuba abantwana bavele ngakumbi ngexesha lasebusuku
• imibala emibini iyafumaneka, eluhlaza okwesibhakabhaka nepinki, ukhetho olufanelekileyo kumakhwenkwe namantombazana
• Zonke iindawo zokulayisha ziqinisiwe, zomelele kwaye zomelele
Ukhetho olulungileyo lwabantwana njengebhegi yesikolo.
Uyilo lwefashoni yaseTIGERNU kulutsha
Umthamo: Ubhaka uyilo lwefashoni enobungakanani be-29 * 14 * 45cm (L * W * H) Igumbi eliphambili elinokwahlulahlula okuninzi kunye nomkhono welaptop owakhelweyo ulingene ukuya kwi-15.6 ″ ilaptop. iimfuno zakho zemihla ngemihla, iincwadi, iimpahla, ibhanki yamandla, i-headphone njalo njalo. Igumbi langaphambili elineepokotho ezahlulayo ezininzi kunceda ukucwangcisa izinto zakho ezincinci, iipeni, isipaji, umnxeba, iintambo njl. buyisela umva ipokotho yobusela yezinto ezibalulekileyo.
Iimpawu zokhuseleko: Ubhaka wefashoni wenziwe nge-splashproof & scratch nylon enganyangekiyo, yomelele kwaye ihlala ixesha elide. Umaleko ophindwe kabini wamazinyo amane anelungelo elilodwa lomenzi elinelungelo elilodwa lomenzi elinikezela ukhuseleko olongezelelekileyo kukhenketho lwakho nakwimpilo yemihla ngemihla. Umphambili wombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye neorenji njengomhombiso, okwenza ubhaka wesikolo ube kwifashoni kwaye upholile.
Iimpawu: Ubhaka weshishini unemixokelelwane emibini egxunyekwayo yamagxa kunye nepaneli yangasemva enezinto ezikhuthaza ukuhamba komoya kwentuthuzelo ekuhambeni.Kwaye imitya yegxalaba ehlengahlengisiweyo kunye nexineneyo iyasuswa ukwenza ubhaka ukhululeke ukunxiba naxa ulayishwe ngazo zonke izixhobo zakho.
Le bhegi yingxowa yoyilo yesikolo yoyilo, ilungele amadoda, abasetyhini, abafundi ngayo nayiphi na injongo. I-TIGERNU ubhaka omkhulu wesikolo, eyunivesithi, ukuphumla ngeempelaveki, ukuhamba ngamanye amaxesha, iigyms, umsebenzi wemihla ngemihla, ishishini, uhambo, inkampu kunye nokunyuka intaba.
Iimpawu: Yakha kwizibuko le-USB kwaye intambo ye-USB enokufumaneka ikunika indlela elula ngakumbi yokutshaja ifowuni, ithebhulethi, njl njl. Umngxuma weefowuni unika inkululeko yakho ukonwabela umculo naninina. Umtya obonakalisayo wenza ukuba ubonakale ngakumbi kwaye ukhuseleke ebusuku.Iimilo zomtya zihlengahlengiswa kwaye zinokunciphisa uxinzelelo egxalabeni.